Manjaro 20.2 inosvika neshanduro nyowani dzePlasma neCinnamon | Linux Vakapindwa muropa
Semunhu wekushandisa Manjaro pane yangu Raspberry Pi 4 uye pane yako USB vhezheni, Iyi haisi iyo nhau ingaite kuti ndiwedzere kufara nezve ino inoshanda system, asi nhasi kwave nekuvhurwa kutsva, uye izvo zvinogara zvichikosha. Maminetsi mashoma apfuura, kambani yakaita yepamutemo kumhara kwe Manjaro 20.2 Nibia, uye panguva yekunyora uku zvese zviri kuitika munguva pfupi zvekuti havana kana kuburitsa chinyorwa chekuburitsa nenhau dzakatanhamara.
Vazivisa kuvhurwa paTwitter, kwavanotiyeuchidza kuti kodhi zita ndiNibia uye nezvimwewo, zvakadaro ipa mashoma kuisirwa ISOs neLinux 5.4, yazvino LTS vhezheni yeLinux kernel. Zvinomira pachena kana zviri pachena kuti iyo vhezheni yaPamac iyo inosanganisira, ndokuti, graphical chishandiso chekuisa software isingafanire kuvhiringidzwa ne pacman, inoramba yakafanana ne9.5.12 v20.1.2 yeiyo inoshanda sisitimu.
Manjaro 20.2 inoenderera naPamac 9.5.12
Isu tinofara kuzivisa kuburitswa kwe @ManjaroLinux 20.2 tinoshevedza #Nibia. Isu tinopa zvakare Minimal-ISOs neKernel 5.4 LTS yakawedzera kune yazvino yakagadzikana kernel kuburitswa. Tora ivo ikozvino.
- Manjaro Linux (@ManjaroLinux) December 3, 2020
Isu tinofara kuzivisa kuvhurwa kwe Manjaro 20.2 tinoshevedza #Nibia. Isu tinopawo mashoma ISOs neKernel 5.4 LTS iyo yatinowedzera kune yazvino vhezheni yakagadzika yeiyo kernel. Titorere izvozvi.
Uye pandanga ndichinyora chinyorwa ichi, vakatoburitsa shanduko dzakakurumbira, kunyangwe izvozvi vachingoonekwa mumusangano. Uye ivo havataure shanduko zhinji, kupfuura iyo runyorwa rwezviyo zvavanosanganisa, ine yakanyanya-ku-zuva yakagadzikana vhezheni ye Linux 5.9.11, iyo iyo KDE vhezheni yava kushandisa Plasma 5.20.4 yakaburitswa iyi Chipiri, iyo sinamoni vhezheni inoshandisa Cinnamon 4.8 uye ivo vaisanganisira yakajairwa Haskell uye Uptream inogadziridza.
Mifananidzo mitsva, iyo yatinoyeuka ndeye chete kwekuisa nyowani, ndizvozvo pano iyo GNOME vhezheni, mu Iyi link iyo KDE vhezheni uye mu uyu mumwe iyo Xfce vhezheni. Kune vashandisi varipo, mapakeji matsva aya atowanikwa muPamac kana isu tinogona kugadzirisa iyo yekushandisa system nemirairo «sudo pacman -Syu». Ini, ini pachangu, kuenderera mberi ndakamirira iyo inofadza nhau yekuti ivo vatangisa iyo kde-usb vhezheni, kurota kuti haina kuramba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 20.2 inosvika neshanduro nyowani dzePlasma, Cinnamon uye Linux 5.9
Ndine urombo, kugadzikana kwakadii Manjaro, nekuti inoratidzika kunge yakanaka kwazvo. Asi kare kare ini ndaishandisa Arch linux, uye ini ndakave nerakaipisisa ruzivo rwekuvandudza k kubva 4 kusvika 5, saka ndakarega kuishandisa.
Iye zvino ini ndinoshandisa Fedora, zvakanaka, ine tupukanana tudiki, asi unoshandisika.
Ndakaverenga zvese, uye ini pachangu ndakafunga kuisa Manjaro pakomputa yangu huru mwedzi yapfuura. Ini handina kuzviita nekuda kwemashoko akataura kuti Rolling Release dzimwe nguva inotamba zvinyengeri, uye nekuti ini pachangu ndakapedza mazuva ndisingakwanise kupinda webhusaiti muManjaro (KDE neXfce) uye ini handizive zvakaitika, asi ndiri kushandisa iri pane USB uye ini ndanga ndisina mamwe matambudziko. Chinhu chega ndechekuti iyo USB vhezheni ndeye Xfce. Ndiri kushandisa KDE pane Raspberry uye ini handina kuona chero chakaipa futi, asi pabhodhi ivo vanoenda zvishoma zvishoma neyakagadziriswa.
Kubva pane zvakaitika kwandiri, ndinofara, asi ini handingazvikurudzire nekuti ndinoziva kuti kune vanhu vanogunun'una. Pamwe iwe unoiisa, inokodzera iwe zvakakwana uye haudi chimwe chinhu, asi zvakaitika kwauri munguva yakapfuura zvinogona kuitika kwauri zvakare.
Ndanga ndichishandisa Manjaro kweanoda kusvika makore matatu pafoni yangu yekushandisa zuva nezuva uye chokwadi ndechekuti handina zvichemo, kunyanya maererano nekusimba nekuvandudzwa. Ramba uchifunga kuti kunyangwe Manjaro iri chaizvo Arch, iine zvinyorwa zvaro, saka rakaita senge imwe nhanho yekuchengeteka kana uchivandudza, nekuti iyo yekuvandudza inosvika kutanga kuArch uye kana zvese zvikafamba mushe zvino zvinosvika paManjaro. Ngatitii hausi se "pamucheto wekucheka" wekuvandudzwa sezvauri muArch.